Daalụ! | Martech Zone
Tọzdee, Nọvemba 27, 2008 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Enwere m ọtụtụ ihe iji nwee ekele maka ekele a… ahụike na ahụkebe ụmụaka, ezigbo ndị enyi, na a nrọ ọrụ. Banyere blọọgụ m, onye m ji ụgwọ nnukwu ụgwọ bụ gị! Nke a bụ ndepụta nke ndị na-ekwu okwu na blọọgụ m (maka ọnụ ọgụgụ ọnụ ọgụgụ!). Ntinye aka gị na blọọgụ a bụ ike na-akpata ogo ọdịnaya nke m na-anwa itinye ebe a kwa ụbọchị.
Ọ bụrụ na ị na-eche etu m siri mee nke a, agbaara m okwu SQL ndị a megide nchekwa data WordPress m:
Họrọ CONCAT ('> li >> a href = "',` comment_author_url`, '">',` comment_author`, '> / a >> li>') SITE `` wp_comments`E Ebe 'comment_approved` = 1 NA ikwu_author_url> > '' NA ikwu_author >> 'Douglas Karr'NA ikwu_type =' 'GROUP BY' comment_author`,
Tags: 2008ade olonohblọgụ blọgụosisi Brandoncommentsotu taplinaja aja ajaOdinwanyiJDjulie dintamartin weissmike schinkelmmejummachipat coylepatric welchobere ahia ahiaezigbo camdensteven ekwennateknụzụogwu schrocktony chungwilliam tully
Nov 27, 2008 na 3:45 PM
Daalụ Douglas maka nnukwu blog gị! Obi ụtọ na-ekele!
Nov 27, 2008 na 9:15 PM
Daalụ! Anyị niile nwere obi ụtọ ma mụta site na blọọgụ gị. Njikọ njikọ ahụ dịkwa mma.
Nov 27, 2008 na 10:53 PM
Nov 27, 2008 na 11:53 PM
Daalụ maka aha nwoke 🙂
Anyị enweghị ekele ebe a na UK mana… Obi ụtọ na-ekele 🙂
Nov 28, 2008 na 12:34 AM
Thanx Douglas maka icheta anyị na ịkpọtụ aha ebe a n'ụbọchị inye ekele.
Nov 28, 2008 na 12:36 AM
Obi ụtọ na-ekele. Ghọta okwu gị.
Nov 28, 2008 na 12:49 AM
Hey ekele maka inwe nnukwu ọdịnaya.
Kedu ka ị si mepụta ndepụta a? Ọ ga-amasị m ịme otu ihe ahụ na blọọgụ m.
Nov 28, 2008 na 2:04 AM
Amigo! Daalụ maka mkpu. Echere m na obere obodo nwere ike ịga ogologo ụzọ. Aga m akwụsị ọzọ.
Nov 28, 2008 na 2:26 AM
Daalụ maka aha nwoke .. Olile anya na ị na-enwe ọmarịcha ekele.
Nov 28, 2008 na 7:36 AM
Nwere ike chọọ iyo maka ndepụta URLs ems Yiri ka m bụ onye kewara ekewa…
Nov 28, 2008 na 9:50 AM
mma aghụghọ ~ ekele maka aha
Nov 28, 2008 na 10:19 AM
Daalụ maka ịkpọtụrụ Doug. Ma m swearụrụ iyi na anaghị m ekwu ihe a iji mee ka ọnụ ọgụgụ m na-ekwu site na 1 🙂
Nov 28, 2008 na 11:14 AM
Ọ masịrị m. Nke a post ga-ogologo oge ime!
Nov 28, 2008 na 11:39 AM
Daalụ! Obi ụtọ na-ekele!
Nov 28, 2008 na 11:01 AM
Are dị obiọma. Daalụ maka ịbụ Doug gị. Na ekele maka ịkụziri anyị nke ukwuu.
ịyoụ mkpụrụ osisi
Nov 28, 2008 na 1:27 PM
Daalụ maka ịkpọtụrụ! Emere m ihe dịka ọnwa ndị gara aga (mgbe mgbochi m ruru ihe 2000 kwuru). Mgbe niile dị mma inyeghachi ịhụnanya.
Nov 28, 2008 na 8:07 PM
Daalụ maka ekele, Doug. Nọgide na-arụ ọrụ ọma!
Nov 28, 2008 na 9:18 PM
M na-eche ma ọ bụrụ na m abụọ ndenye e jikọtara ọ bụrụ na m ga-ọkwá elu na ndepụta…
Nov 29, 2008 na 6:22 AM
Nke a bụ nnukwu ndepụta nke ndị na - ekwu okwu. Ahụtụbeghị m onye ọ bụla ga-etinye njikọ ịhụnanya maka ndị na-ekwu okwu ha niile. N'ezie, nke a bụ otu nnukwu ekele m na-agụ taa.
Nov 29, 2008 na 10:03 AM
Chaị nke ahụ bụ ọtụtụ ekele yous !!
Obi ụtọ na-ekele, Doug.
Nov 30, 2008 na 12:26 AM
Obi ụtọ na-ekele na-ekele gị!
Nov 30, 2008 na 3:17 AM
Ọ bụ ihe ịtụnanya dị mma na njikọ njikọ gị na dashboard m. Ọ bụ na SQL abụghị ihe ọchị?
Obi ụtọ na-ekele gị, kwa. Anyị nwere toki anyị ebe a na Canada n'ọnwa gara aga.
Nov 30, 2008 na 10:28 PM
Ndewo Doug, Nnukwu blog ị nwere ebe a, ahụghị m aha m mana enwere m njikọ na-ekwu na enwere njikọ yabụ ana m ekele gị maka njikọ njikọ ahụ. Obi ụtọ na-ekele gị!
Nov 30, 2008 na 11:16 PM
Daalụ maka ịkpọtụrụ Doug. Obi dị m ụtọ ịhụ ka ọtụtụ ndị mmadụ na-eburu echiche "SEO maka Xmas"!
Dee 1, 2008 na 9: 54 AM
Doug, enwere m olile anya na ị nwere onyinye inye ekele! Daalụ maka ịkekọrịta na amamihe ị na-enye. Ka ndị na-agụ akwụkwọ gị bawanye ụba!
Dee 1, 2008 na 10: 12 AM
Daalụ maka njikọ ahụ. Na na na a software Mmepụta ma ahịa dị mkpa ka m onwe onye branding, wdg .. ing
Dee 1, 2008 na 11: 30 AM
Daalụ maka njikọ Doug, ọ dịtụbeghị mgbe ị na-ahụ blog gị, ahụrụ m njikọ ahụ na dashboard m, ọ tụrụ m n'anya n'ihi na m na-eche etu ị ga-esi depụta ndị nkọwa gị niile… Ma ugbu a, amaara m otu esi eme ya! 😀
I read ur blog from Google Reader, na-ekele gi ozo maka isi okwu gi.
Dec 1, 2008 na 12:09 PM
Daalụ maka njikọ 🙂
Dee 2, 2008 na 12: 40 AM
Daalụ maka njikọ ahụ, ana m ekele gị maka oke nghọta ị nyere ebe a na-enyere anyị ndị na-ede blọgụ ọhụrụ na ndị ọhụụ aka ịchọta ụzọ anyị site na ihe a anyị na-akpọ web.
Dee 2, 2008 na 4: 19 AM
Daalụ maka Link Doug. Obi ụtọ na-enye ekele
Dec 2, 2008 na 9:10 PM
Ọtụtụ ụgwọ, ezigbo sir.
Doug, daalụ maka ịkpọtụrụ ya na post ekele gị. Ọ bụ n'ezie akwụkwọ pụrụ iche, na mgbe m hụrụ njikọ dị na dashboard WordPress m, ọ jidere m na mberede.
Nọgide na-arụ ọrụ dị ukwuu, yana ị na-eweta nghọta dị ukwuu site na blog gị.
Nwee ọmarịcha ngwụcha ruo afọ 2008 ka afọ 2009 wee gọzie gị karịa karịa ka ị ga - enwe ike inwe ekele maka otu afọ site ugbua.
Dec 3, 2008 na 9:52 PM
Daalụ nke ukwuu maka njikọ ahụ! 🙂
Dee 4, 2008 na 7: 33 AM
Daalụ maka itinye saịtị blọọgụ m http://www.lancecorner.com.
M hụrụ n'anya na-agụ gị blog posts 🙂
Jide ezigbo ọrụ!
Dee 7, 2008 na 10: 17 AM
Daalụ Douglas! Obi ụtọ na-ekele! 😀
Dee 12, 2008 na 12: 58 AM
Daalụ maka banyere !! Nke ahụ dị ụtọ nke gị !! A ezi ekele 🙂
Dec 12, 2008 na 4:14 PM
Ọ bụ echiche dị ukwuu banyere gị ịlaghachi ndị enyi gị na ndị ọbịa na ụzọ a na-atụghị anya ya. Enwere m obi ụtọ na ọdịnaya na blọọgụ gị, agbanyeghị na m si na nleta ọbịbịa nwa oge. Omume obi ebere gị nke na-egosi na ntanetị m na-eweta azụ wetaara m "ọkụ ọkụ" na ọchị.
Blog gị bụ onye na-elekọta! Ọzọkwa, enwere m ekele maka gị. Na-aga n'ihu ngọzi na uto n'ihe niile ị na-eme.
Apr 22, 2009 na 7: 52 AM
Daalụ nke ukwuu maka njikọ ahụ
Mee 10, 2009 na 11: 41 PM
Obere oge, mana ekele maka ịkpọ aha m! Great mara mma, Doug. 🙂
Jun 5, 2009 na 10: 02 PM
Daalụ maka njikọ ahụ